विश्वमा सबैभन्दा धेरैलाई लागेका ७ क्यान्सर (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
विश्वमा सबैभन्दा धेरैलाई लागेका ७ क्यान्सर (भिडियोसहित)
३ भाद्र २०७७, बुधबार १७:३१
क्यान्सर एक प्रकारको प्राणघातक रोग हो । क्यान्सरबाट पीडित बिरामी सजिलै ठीक हुन मुश्किल हुन्छ । किनकी यस रोगको लक्षण ढिला पत्ता लाग्ने हुन्छ । संसारमा क्यान्सर रोगको स्थायी उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । समय रहँदै यस रोगको उपचार सही तरिकाले नभएको खण्डमा यसलाई रोक्न मुश्किल हुन्छ ।
शरीरमा हजारौंको संख्यामा खराब कोशिकाहरु हुन्छन् । प्रत्येक सेकेन्डमा नयाँ कोशिका पैदा हुन्छ र पुरानो खराब कोशिका नष्ट हुन्छन् । तर क्यान्सर भएमा रातो तथा सेतो रक्तकोषिको सन्तुलन बिग्रन थाल्छ र, कोषिकाको विकास अनियन्त्रित रुपमा भएर क्यान्सरको रुपमा परिणत हुन्छ ।
कसरी लाग्छ क्यान्सर ?
आज हामी मानवका विभिन्न अंगहरुमा लाग्ने क्यान्सरका प्रकार र तीनीहरुको उपचारसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री लिएर आएका छौं । हेरौं यो भिडियोमा :
क्यान्सर, भिडियो सामग्री
Prevकोरोना अपडेटः पछिल्लो २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या १२०
यसरी गरियो राष्ट्रकवि घिमिरेको अन्त्येष्टि (भिडियोसहित)Next
के हो क्यान्सर ? कसरी बच्न सकिन्छ ?